Annaga nagu saabsan - KEYLASER GROUP LTD
Beijing KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd. oo la aasaasay 2007, soo saare qalab caafimaad oo caalami ah ayaa soo saara alaab heer sare ah oo loogu talagalay dhakhaatiirta qalliinka caagga ah, dhakhtarka maqaarka, dhakhaatiirta, iyo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka.
Tayadu waa dhaqankeena.
KEYLASER waxay soo saartay wax soo saarka ugu horumarsan si uu u hogaamiyo suuqa caalamiga ah iyo alaabooyinka waxaa si caalami ah u suuq gaynaya xafiisyada dibadda.
KEYLASER waxay la shaqaynaysaa la-hawlgalayaasha qaybinta adduunka oo dhan si ay u bixiso qanacsanaanta macaamiisha ugu sareysa.
Iyada oo kala duwan oo line alaabta lagu kalsoonaan karo oo ay ku jiraan IPL, E-light, SHR, Diode laser, Multi-channel RF, RF microneedle, CO2, Diode laser, iyo laser Q-Switch, KEYLASER waxay u adeegtaa warshadaha sida mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah heerka R&D adag. iyo khibrad qiimo leh.
Oo ka soo qayb gal bandhigyo badan sanad walba, si aan sumaddeena uga dhigno mid caan ka ah aduunka oo dhan
Kooxdayada R&D ee awooda leh waxay uga faa'iidaysan karaan inay horumariyaan alaabooyin aad u casrisan oo saaxiibtinimo leh.OEM, ODM, wakiilka kanaalka, qaybiyaha, ama noocyada kale ee iskaashiga.Waxaan leenahay waayo-aragnimo badan oo guul leh waxaanan leenahay rabitaan xooggan si aan u horumarino iskaashi ganacsi oo kuu dhow si loo helo faa'iido iyo horumar labada dhinacba ah.
Ku saabsan KEYLASER
Waxaan soo saareynaa naqshad muuqaal cusub iyo software cusub oo loogu talagalay mashiinnada quruxda kala duwan.Waaxdayada R&D waxay si dhow ula shaqaynaysaa shuraakadayada caalamiga ah
Shirkaddayadu waxay korodhay saddex-meelood meel.
Shirkaddu waxay u qaybsantaa waaxyo kala duwan oo mid waliba leeyahay agaasime u gaar ah.Waaxda Suuqgeynta iyo Iibka waxay ka kooban tahay kooxda iibka, iyo adeegyada macaamiisha.Waaxda Maamulka waxa kale oo ka mid ah Shaqaalaha.
Waxa aanu nahay hogaamiyayaasha suuqa ee sadex wadan.waxa aanu ku balaadhinay hawlgaladayada aduunka oo dhan in ka badan 180 wadan
Sannadka 2020, waxaan ku leenahay in ka badan hal qaybiye gaar ah oo ka jira waddamada qaarkood,
Waxaan la shaqaynaa xafiisyadayada aduunka oo dhan.
La aasaasay 2007
Xirfadle iyo farsamo